Xabsi Guri Laga Dhigay Madaxweyne Ku Xigeenka Iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Sep 26, 2017
Xiisada siyaasadeed ee ka taagnayd Cadaado ayaa cirka u sii shareertay, kadib markii Madaxwaynaha Galmudug uu mamnuucay inaan Shirar Siyaasadeed la qaban karin, isla markaana uu xiray Xaruntii Baarlamaanka Galmadug.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Madaxweyne Xaaf uu ka dhigay Xabsi guri isaga iyo Maxamed Xaashi Cabdi Madaxweyne ku xigeenka Maamulkaas isla markaana uu ammaankooda halis ku jiro.
Gudoomiyaha oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay markii horeba inuu deganaa Madaxtooyadda Galmudug, haddana la diiday inuu ka baxo, amarkaasina uu soo saaray Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle “Xaaf” oo ay isku Khilaafeen go’aankii dhawaan Xaaf uu ka qaatay Xiisadda Khaliijka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug wuxuu sheegay in isaga, Madaxweyne Ku xigeenka Iyo Gudoomiye Ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Galmudug in laga wada dhigay xabsi guri oo loo diiday wax dhaqdhaqaaq ah, taasina ay halis ku tahay jiritaanka Maamulka.
HornAfrik Waxay dabagal ku samaysay jiritaanka Warkan waxayna ogaatay in Madaxwayne Ku Xigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug aan la galin Xabsi Guri oo ay si caadi ah u fadhiyaan Xafiisyadooda, balse waxaa laga mamnnuucay inay qabtaan Shirar Siyaasadeed.
Maamulka Galmudug oo ka mid noqday Maamuladdii taageeray Isbahaysiga Sucuudiga iyo Imaaraadka, kana dalbaday Dowladda Dhexe inay Xiriirka u jarto Qadar ayaa waxaa soo food saaray Culays Siyaasadeed iyo Khilaafaad la aaminsan yahay in Muqdisho laga soo abaabulay, balse Dowladda Dhexe ee Somalia illaa iyo hadda kama aysan hadlin Xiisadda ka jirta Galmudug.
Galmudug Oo Beenisay Inay Xiriirka U Jartay Dowladda Dhexe Ee Somalia.